Imithombo ephezulu ye-10 yokufumana amagama a-Ancestor's Maiden Names
Ukufumanisa igama lomsikazi wenkokhelikazi wesibini ngamanye amaxesha kunzima kunzima, kodwa kunokukhokelela kwesebe elitsha lentsapho yakho- amagama amasha, iintsapho ezitsha kunye nokudibanisa ezintsha. Zama ezi zinto ezilishumi kwimithombo yamagama kumabhinqa amagama ebhinqa kwintsapho yakho.
Indawo enokwenzeka kakhulu yokufumana igama lomfazi wesibini kumqolo wakhe womtshato. Ezi zingabandakanyi kuphela ilayisenisi yomtshato , kodwa isitifiketi somtshato, isaziso somtshato, amabhandi omtshato, kunye nezibophezelo zomtshato. Kubalulekile ukuba ukwazi igama lomlingane, indawo yomtshato kunye nomhla wokutshata umlinganiselo wokufumana ezi rekhodi.
IiNcwadi zeMitshato ze-Intanethi zamahhala kunye neenkcukacha ezininzi »
I-Archives kaZwelonke kunye noLawulo lweeRekhodi
Hlola wonke unyaka wabalo lwabafundi okhoyo okhokho bakho , kuze kube ngumnyaka awafa ngawo. Izibini ezitshatileyo zingatholakala zihlala nabazali bomfazi; Umzali osekhulile kungenzeka ukuba wongezwa kwindlu; okanye abazalwana, odade, abazala, okanye amanye amalungu entsapho banokufunyanwa behlala kunye neentsapho zooyise. Iintsapho ezihlala kufuphi nazo zinokuba nezihlobo.
Isikhokelo soPhando soBanikelo kuBalo lwabantu base-United States
Indlela yokufumana i-Ancestors yaseCanada kubalo
Ukuphanda abaPhumela kwiBritish Recensement
Uluhlu lwaBalo boBalo luyakwazi ukukuxelela malunga nabadala bakho .
Isibonelelo sokudluliselwa komhlaba kuNicholas Thomas kuya kuLambert Strarenbergh e-Albany, eNew York, ngo-1734. I-Getty / Fotosearch
Umhlaba wawubalulekile, kwaye wawudla ngokugqithisa ukusuka kubaba ukuya kwintombi. Hlola izenzo okhokho kunye / okanye umyeni wakhe oquka amagama aseLatini "et ux." (kunye nomfazi) kunye ne "et al." (kunye nabanye). Baya kunika amagama amabhinqa, okanye amagama omntakwabo okanye abantwana. Kwakhona gcina iliso lakho kwindoda okanye isibini esithengisa umhlaba okhokho bakho nge dollar, okanye enye imali encinci. Abo bathengisa umhlaba bangaphezu kwabazali okanye izalamane zokhokho bakho. Phanda amangqina kuyo nayiphi na intsebenziswano apho umhlolokazi uthengisa umhlaba, njengoko bengabazalwana.
Indlela Yokulandelela Intsapho Yakho kwi-US Deeds Deeds
IiRekhodi zeMhlaba kunye neeRhafu zaseKhanada
IiRekhodi zomhlaba weeRekhodi kwi-Intanethi
10 Izinto ezipholileyo ongazifunda kwiimfuno ezingaphezulu »
IiRekhodi zeNgxelo kunye neeWills
Ukuba unako isethi yabazali kwikhokhokazi yakho, khangela iirekhodi zabo okanye uthanda. Amagama omagama wabantwana abancinci, kunye namagama abo abatshatileyo, badlaliswe. Ekubeni iziqhamo zihlala zibandakanya ukwahlukana komhlaba, iikhowudi zekhokhokazi yakho inokukwazi ukukukhokelela ukuba uhlole iinkqubo.
Indlela yokufumana iiWill Wills Australia, Estate and Records Records
Iindleko kunye nokuLawula eNgilani naseWales
Imithombo yoBudlelwane beNtsapho efihliweyo kwiiRekhodi zeMpahla ngakumbi »
Ukuba ukhokho wakho wesifazane usanda kufana ukushiya isatifikethi sokufa, oku mhlawumbi enye yeendawo ezimbalwa apho igama lakhe lentombi libonakala khona. Ekubeni izatifikethi zokufa zihlala ziquka ulwazi olungachanekanga, khangela isitifiketi segama lomcebisi. Ukusondelana kobudlelwane phakathi kolwazi kunye nomfi kungakunceda ukuba uhlolisise ukuchaneka kokunikwa kwengcaciso efumanekileyo. Funa iirekhodi zokufa ngamnye kumabhinqa abantwana. Nangona isitifiketi sokufa kokhokho wakho asibandakanyi igama lomama wentombi, abanye banako.
Iindawo ezili-10 zokuqala ukukhangela kwakho kwiiRekhodi zokufa kwi-intanethi . Kaninzi "
Getty / Sherman
Hlola amaphephandaba kwendawo apho okhokho bakho bahlala khona ngenxa yokuzalelwa okanye ukutshatisa umtshato. Nangona ungeke ukwazi ukufumana isifuba sokhokhokazi bakho, ungayifumana izaziso zabantwana bakowenu okanye amanye amalungu omtshato anika iingcebiso ezifanelekileyo; unokuthi ukhankanywe kwisigwebo somzalwana, umzekelo. Ukudibanisa uluhlu lwabantakwabo bakho kunye nophando lwabalo luluntu lunokukunceda ukucacisa iintsapho.
Indlela Yokufumana Imbali Yakho Yentsapho Kwizinto Zokuzifumana
Amangcwaba kunye neeNgxelo zoMngcwabo
Imibhalo yombombo yamabhinqa abatshatileyo okanye abahlolokazi ingaquka igama labo lentombi. Hlola kwakhona iindawo zokungcwaba, njengokuba kunokwenzeka ukuba abazali, abantakwabo, okanye amanye amalungu entsapho angcwatyelwa kufuphi. Ukuba kukho, iirekhodi zasekhaya zomngcwabo zingaquka ulwazi malunga nabazali abafayo okanye abahlobo babo.
Uphando lwembali lomndeni kwiMangcwaba
Igalari yezithombe zeMpawu zeTystone kunye neZiselo zabo . »
I-Maremagnum / Getty Izithombe
Ingaba iqabane likayihlo okanye abantwana bakho emkhosini? Izicelo zempesheni kunye neerekhodi zenkonzo yemikhosi zihlala ziquka ulwazi oluhle lolwazi. Amalungu entsapho ahlala esayinwa njengamangqina. Kweemeko ezithile, abafazi banokufakela iinzuzo zomhlala-phantsi zomnxeba egameni lomntu ofileyo okanye unyana ongatshatanga; ezi zihlandlo zihlala ziqulethe iikopi zeerekhodi zomtshato okanye iifidavithi ezenziwa ngumtshato.
Iirekhodi zePensheni zeMfazwe yamaQumrhu oLuntu
IiRekhodi zePensidence zePedential Confederate Pension
Indlela yokulandelela ama-Ancestors aseMelika
Imithombo ephezulu yokuphanda ama-Ancestors ase-Canada
Imithombo ephezulu yokuPhanda ngeeBandla zaseBrithani
Imithombo ephezulu yokuphanda ama-Ancestors aseMaspala ase-Australia . »
Getty / Dave Porter Peterborough Uk
Iicawa ziyimvelaphi efanelekileyo yokuzalwa okanye iirekhodi zamaKristu eziqhelekileyo ziquka amagama abo babini abazali, ngamanye amaxesha kubandakanya igama lomfana lomama. Iirekhodi zomtshato zesonto ziya kubandakanya igama lomyeni wesigxina, kwaye liyimithombo eminye yolwazi lomtshato kwiindawo kunye namaxesha apho ukubhaliswa kwabemi kungabonakali.
Iimbali zeMbali zeMetistist neeRekhodi kwi-Intanethi .
Getty / Dave kunye neLes Jacobs
Kuphela yinkcazelo, kodwa igama leentombi lomama linokufumaneka ngamanye amaxesha phakathi kwamagama abantwana bakhe. Amagama aphakathi okungaqhelekanga, phakathi kwamakhwenkwe okanye amantombazana, unokuthiwa ngumama wentombazana okanye ugogo. Okanye intombi endala ingabizwa ngokuba ngumama wakhe omama.
Iimpawu zeNdlela zoLuntu lweNdlu zeBritish Isles
I-BROWN Surname Intetho kunye Nemvelaphi
I-SULLIVAN Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
I-PIERCE - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
ISHLAWULO SOMSEBENZI Igama kunye Nemvelaphi
I-GONZALEZ Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
Igama lomnxeba umxholo kunye nomsuka
Igama lomnxeba Umxholo kunye neMbali Yentsapho
Indlela yokudibanisa "Fermer" (ukuVala)
Ukubuyisela i-Brownfield kwiZiko ezili-12 eziGcini
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseWauhatchie
Iimpawu zeBantwana rhoqo
Iyiphi Intengo yeMarmaid?
Ukuqonda ukubunjwa kweDNA ye-Double Helix
I-Bond Order Inkcazo kunye nemizekelo
Indawo entsha, ikhaya lasekuqaleni likaShakespeare
Indlela yokufunda ngeVocab Quiz
I-Atomic Number 1 kwiThebula lePeriodic
Uluphi Uhluko phakathi kweNtsapho yoLuntu kunye neQela EliQelayo?
10 Iingqinisiso ezimbi ngokuchanekileyo malunga nomtshato wesini
20 Iindlela zokuFundo zoBumba